कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको डिन नियुक्तिदेखि बढुवामा मनपरी «
कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको डिन नियुक्तिदेखि बढुवामा मनपरी
कर्णालीकै स्वास्थ्य क्षेत्रको धरोहर कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पदाधिकारीबाटै नियम विपरितका गवितिविधि भइरहेको पाइएको छ । प्रतिष्ठानले आफ्ना आसेपासे भर्तीकेन्द्रको उपनाम पाइरहेको छ । पछिल्लो समय उपकुलपतिको कार्यशैलीले गर्दा प्रतिष्ठानकै प्रतिष्ठामा प्रश्न उठिरहेको अवस्था छ ।
कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लाका उपकुलपति प्रा.डा राजेन्द्रराज वाग्लेको एकल निर्णयमा तीन जना डिन नियुक्त गरिएको छ । ऐन नियम विपरित मनपरी रुपमा आफ्नो स्वार्थका लागि डिन नियुक्त गरिएको खुलासा भएको छ ।
प्रतिष्ठानकै संगठित कर्मचारीहरुको छाता संगठन कर्मचारी कल्याणकारी समाज जुम्लाले एक प्रेस विज्ञप्तिमार्फत यस्तो खुलासा गरेको हो । प्रतिष्ठानका सम्पूर्ण कर्मचारी उपकुलपतिको यस कार्यशैली विरुद्ध आन्दोलित भएका छन् ।
कर्मचारी कल्याणकारी समाज जुम्लाका अध्यक्ष रामकान्त उपाध्यायले भने, “प्रतिष्ठानमा हाल दुई जना डिन कामकाज नपाएर बसिरहेका छन् । प्रतिष्ठानलाई आर्थिक भार बढिरहेको छ । यसैमाथि उपकुलपति वाग्ले पुनः २६ असोजमा काठमाडौँ सम्पर्क कार्यालयबाटै प्रा.डा मुनीराज क्षेत्रीलाई अनियमित तवरले पव्लिक हेल्थ संकायको डिनमा नियुक्ति गरेका छन् ।”
अघिल्ला डिनले काम नपाइरहेको अबस्थामा थप डिन नियुक्त गरेर स्वार्थ पूरा गर्न खोजेको पनि कर्मचारीहरुको आशंका छ । २४ घण्टाभित्र सो निर्णय फिर्ता लिन चेतावनी दिएका छन् । उपकुलपतिले उक्त निर्णय नसच्याए कडा आन्दोलन गर्ने समेत बताएका छन् ।
कर्णाली प्रतिष्ठानमा अहिलेका तीन वटा डिनमध्ये पहिलो सरस्वती गौतम, दोस्रो प्राध्यापक डाक्टर रेशमबहादुर राना भएको र २६ असोजमा जनस्वास्थ्य डिन पदमा प्राध्यापक डाक्टर मुनिराज क्षेत्रीलाई नियुक्ति गरेको प्रतिष्ठान प्रशासनले जानकारी दिएको छ ।
कोभिडका कारण दुई जना डिनलाई खासै काम पर्याप्त नभएको अबस्थामा अझै अर्का डिन नियुक्त गर्नु उपकुलपतिले आफ्नो पदावधि जाँदै गर्दा पदको दुरुउपयोग गरेर राज्य कोषको दोहन गर्न मान्छे भर्ति केन्द्र बनाएको भन्दै कर्मचारीले विरोध जनाएका हुन् । प्रतिष्ठानका अनुसार फागुन महिनामा उपकुलपति वाग्लेको पदावधि सकिँदै छ ।
प्रतिष्ठानका उपकुलपति राजेन्द्रराज वाग्लेले प्रतिष्ठानलाई आवश्यक पर्ने जनशक्तिको निय्ुक्ति गरिएको बताए । प्रतिष्ठानलाई शसक्त बनाउनकै लागि नर्सिङ डिन एक जना, मेडिसिन डिन एक जना पहिले भए पनि थप एकजना र पव्लिक हेल्थ डिनमा नियूक्ति गरिएको उनको भनाइ छ ।
उनले भने, “मेरो क्षेत्रधिकार भित्र पर्ने कार्यसम्पादन गरिएको छ । यसमा ऐन विपरित भएको छैन । पदाधिकारीकै सल्लाहबाट नियुक्ति गरिएको छ ।” एकल निर्णय नभई ऐन नियमानुसार नै भएको उनको दाबी छ । अहिले नियुक्त भएका डिन प्रोफेसर नै हुन् । उनको आगमनले प्रतिष्ठानलाई उपलव्धी नै हुने उनको भनाइ छ ।
उपकुलपति वाग्लेले प्रतिष्ठानलाई अब पाँच सय बेडको अस्पताल बिस्तार गर्नुपर्ने, एमविविएस शुरु गर्नुपर्ने भएकाले आबश्यक जनशक्ति तयारी गर्नुपर्ने भएकै कारण तयारीमा जुटेको प्रतिक्रिया दिए । कर्मचारीहरुले एकल निर्णय भन्नु ऐनविपरित भन्नु गलत र निराधार भएको दाबी गरे ।
प्रतिष्ठानका उपकुलपति वाग्लेले आर्थिक भार पार्ने गरी आफ्ना पेरीफेरीका जुनियर व्यक्तिलाई पनि लेक्चररमा बढुवा गर्ने काम गर्दै आएको पनि आरोप छ । प्रतिष्ठानका एक कर्मचारीले भने, “जुनियरलाई सिधै लेक्चररमा बढुवा गरेपछि मासिक डेढ लाख तलबभत्ता खुवाउनु पर्ने बाध्यतासम्म बनाएको छ ।”
कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान नेपालको अन्तरिम संविधानको मर्म अनुसार स्थापना भई कर्णाली प्रतिष्ठान ऐन २०६८ अनुसार नै पदाधिकारी नियुक्त हुने प्रावधान छ । कर्णाली प्रतिष्ठान ऐनको परिच्छेद १ दफा २ परिभाषाको (घ) मा उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष, छनौट समितिका अध्यक्ष, रजिष्ट्रार, डिन र निर्देशक भन्ने व्यवस्था छ ।
तर सोही दफामा आवश्यकता अनुसारका पदाधिकारी नियुक्त गर्ने अधिकार पनि छ । उपकुलपति वाग्लेले पछिल्लो तेस्रो डिनमा नियुक्त गरेका महालक्ष्मी नगरपालिका–२ ललितपरका प्रा.डा. मुनीराज क्षेत्रीलाई ऐनको दफा २३ उपदफा १ अनुसार नियुक्त गरिएको नियुक्तिमा उल्लेख छ । तर एउटै पदमा ३ जना व्यक्तिहरु नियुक्त गर्नु राम्रो नभएको कर्मचारीहरुको दावी छ ।
कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लाका प्रमुख उपकुलपति प्रा.डा. राजेन्द्रराज वाग्ले प्रधान कार्यालय जुम्ला भन्दा काठमाडौँ बसेर दुर्गम जुम्लाका नाममा मासिक ४ लाख तलबभत्ता खाने गरेको आरोप छ । उनले कार्यक्षेत्र जुम्ला भए पनि विभिन्न बहानामा बढी काठमाडौँमै बसी बुझ्ने गरेको कर्मचारीदेखि अन्य सेवाग्राहीले आरोप लगाएका हुन् । प्रा.डा. फागुन ०७३ मा प्रतिष्ठानको उपकुलपतिमा नियुक्त भएका हुन् ।
उनको फागुन ०७७ मा पदावधि सकिँदै छ । चार जर्षको कार्यावधिमा उनी बढीमा जुम्ला एक बर्ष पनि नबसेरै काठमाडौँमा बसेर तलब बुझ्ने गरेको जुम्लीबासीको तितो अनुभूति छ । तलबभत्ता बापत उनी प्रति महिना ३ लाख ९४ हजार २ सय ५० रुपैयाँ लिन्छन् । कोरोना माहामारीको समयमा पनि लामो समय काठमाडौंमै बसेको जनगुनासो छ ।
अन्य कर्मचारीको तलब भत्ता नियमित हाजिरीका आधारमा हुन्छ भने पदाधिकारीको तलब भत्ताका लागि हाजिर आर्थिक प्रशासन शाखामा बुझाउनु पर्दैन । ‘कर्मचारीको तलब भत्ता लिन हाजिरी अनिवार्य छ, यदि कोही विदा नलिई छुट्टीमा गएपछि त्यो दिनको तलब काटिन्छ,” एक कर्मचारीले भने “तर, पदाधिकारीको भने उहाँहरु आफँै हाजिर गरेर राख्नुहुन्छ, तलव भत्ताका लागि हाजिरी चाहिदैन, त्यो उहाँहरुकै कार्यकक्षमा हुन्छ ।”
यता उपकुलपति प्रा.डा. वाग्लेसँग यसबारे जिज्ञासा राख्दा उनले आफू काठमाडौं बसेर केन्द्रीय सरकार र प्रदेश सरकारसँग प्रतिष्ठानकै विषयमा समन्वय र सहकार्य गर्ने गरेको बताउँछन् । “स्वास्थ्य मन्त्रालयदेखि विभिन्न मन्त्रालयका मन्त्रीसँग जुम्लाबाट सम्पर्क र समन्वय गर्न कठिन हुने भएकोले काठमाडौँमा रहनु पर्ने परिस्थिति बनेको हो,” उनले भने ।